डा. केसीलाई अनशन स्थगित गर्न आग्रह - BBC News नेपाली
डा. केसीलाई अनशन स्थगित गर्न आग्रह
19 नोभेम्बर 2016
चिकित्सा शिक्षा क्षेत्रमा सुधारका लागि भन्दै नौ बुँदे माग राखेर १० औं अनशनमा बसेका वरिष्ठ डा. गोविन्द केसीका मागप्रति सातौँ दिन शनिबारसम्म सरकारले कुनै औपचारिक प्रतिक्रिया व्यक्त गरेको छैन।
शिक्षामन्त्री धनीराम पौडेलले उनका माग पूरा गर्न समय लाग्ने भन्दै अनशन स्थगित गर्न शनिबार आग्रह गरेका छन्।
डा. केसीका एकजना सहयोगीले चिकित्सा शास्त्र अध्ययन संस्थानमा वरिष्ठताका आधारमा डिन नियुक्ति र एमबीबीएस र बीडीएस कार्यक्रमको शुल्क गत वर्ष झैं कार्यान्वयन गरिए तत्कालका लागि उनले अनशन स्थगित गर्ने आधार तयार हुन सक्ने बताए।
वरिष्ठ डा. गोविन्द केसी अनशन बसेको शनिबार सात दिन भईसक्दा पनि उनका माग सम्बधोन गर्न सरकारको तर्फबाट चासो नदेखाइएको सोलिडारिटी फर डा. केसी अलायन्सको गुनासो छ।
अहिले पनि मागहरुका बारेमा सरकार संवेदनशील छ, राजनीतिक पार्टीहरु संवेदनशील छन्। त्यसैले आफ्ना कतिपय मागहरु पूरा भइरहेका छन्। त्यसप्रति विश्वास गरेर उहाँले अनशन स्थगित गर्नुपर्छ भन्ने अपील हो हाम्रो
धनिराम पौडेल, शिक्षामन्त्री
तर डा. केसीका कतिपय माग जोडिएका शिक्षामन्त्री पौडेलले सरकार संवेदनशील हुँदा-हुँदै पनि उनले त्यसबारे विचार नगरेको आरोप लगाए।
डीन नियुक्ति गर्दा समेत आपत्ति जनाएकोदेखि एमबीबीएस र बीडीएस कार्यक्रमको शुल्क पुनरावलोकन हुँदै गर्दा कुर्न नसकेको फेहरिस्त सुनाउँदै मन्त्री पौडेलले संसदीय लगायतका प्रक्रियाको सम्मान गर्दै डा. केसीले आफ्नो अनशन फिर्ता लिनुपर्ने बताए।
उनले भने, “अहिले पनि मागहरुका बारेमा सरकार संवेदनशील छ, राजनीतिक पार्टीहरु संवेदनशील छन्। त्यसैले आफ्ना कतिपय मागहरु पूरा भइरहेका छन्। त्यसप्रति विश्वास गरेर उहाँले अनशन स्थगित गर्नुपर्छ भन्ने अपील हो हाम्रो।”
चिकित्सा शिक्षा विधेयक पनि प्रक्रियामा रहेको बताउँदै मन्त्री पौडेलले जनतासँग सरोकार भएका विषयलाई सम्बोधन गर्न सरकार तत्पर रहेको जिकिर गरे।
उनले माग पूरा गर्ने प्रक्रिया नटुंगिदै डा. केसीले त्यसलाई खारेज गरी आफूले भनेजस्तै गर्नुपर्नु हठ देखाउँदा समस्या बल्झिएको आरोप लगाए।
तर डा. केसीको आन्दोलनलाई सघाउँदै आएको सोलिडारिटी फर डा. केसी अलायन्स त्यो स्वीकार्न तयार देखिंदैन।
आइओएममा वरिष्ठताका आधारमा डीन नियुक्त गर्ने र चिकित्सा शिक्षामा पोहोरको भन्दा जुन अहिले बढी लिनेदिने गरी मनोमानी चलिरहेको छ। त्यो चाहिँ तत्काल निर्णय गरेर ३५ लाख रुपैयाँभन्दा बढी नलेऊ भनेर व्यवहारमा उतार्ने हो भने बल्ल बाँकी मागमा जाऔं भनेर सुहाउने जस्तो देखिन्थ्यो
जीवन क्षेत्री, संयोजक, सोलिडारिटी फर डा. केसी अलायन्स
उक्त अलायन्सका संयोजक डा. जीवन क्षेत्रीले पछिल्लो पटक डा. केसी अनशन बसेपछि सरकारी पक्षबाट औपचारिक वा अनौपचारिक कुराकानी गर्ने पहल पनि नभएको बताए।
कम्तीमा तत्काल दुईवटा माग सम्बोधन भए डा. केसीले अनशन स्थगित गर्न सक्ने उनको भनाई छ।
उनले थपे, “आइओएममा वरिष्ठताका आधारमा डीन नियुक्त गर्ने र चिकित्सा शिक्षामा पोहोरको भन्दा जुन अहिले बढी लिनेदिने गरी मनोमानी चलिरहेको छ। त्यो चाहिँ तत्काल निर्णय गरेर ३५ लाख रुपैयाँभन्दा बढी नलेऊ भनेर व्यवहारमा उतार्ने हो भने बल्ल बाँकी मागमा जाऔं भनेर सुहाउने जस्तो देखिन्थ्यो।”
अनशनरत डा. केसीको स्वास्थ्य बिग्रिंदै गएको उनका सहयोगीले बताएका छन्।
अनशनको समर्थनमा प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटार अगाडि शनिबार प्रदर्शन भएको थियो।